कमल थापा र बाबुराम भट्टराईबीच ट्वीटरमा भिडन्त
काठमाडौं, मंसिर २० । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको नाममा सरकारले क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गरेको सामाजिक संजालमा सर्वत्र आरोप लागिरहँदा राजनीतिक बृत्तमा पनि यसबारे गम्भिर बहस सुरु भएको छ । सामाजिक संजालमै यतिबेला राजनीतिक बृत्त पनि बहसमा उत्रिएको छ ।
सोहिक्रममा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सामाजिक संजालमा आमने–सामने भएका छन् ।
‘राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रका लागि केहीसमयपछि देशब्यापी आन्दोलन थाल्ने बताइरहेको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रतिक्रिया जनाउँदै ‘जनताको धार्मिक भावना भड्काएर सत्ता स्वार्थको रोटी सेक्ने कुचेष्टा कसैले नगरुन्’ भनेका छन् । भट्टराईले बुधबार ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘म यतिबेला किराँत, हिन्दु र बौद्ध तीनवटै धर्मको साझा तीर्थस्थल हलेसीमा छु । नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सर्वधर्म समभावको उच्च नमूना हो यो ।’
भट्टराईले धर्मको समवेदनशील विषयमा राजनीति गर्नेहरुको नियति भष्मासुरजस्तो नहोस् भन्ने कामना पनि गरेका छन् ।
डा. भट्टराईको सो ट्वीटमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले कडा प्रहार गरेका छन् । थापाले लेखेका छन्, ‘जनभावना विपरीत विदेशीको दबाब र प्रभावमा धर्मनिरपेक्षता लाद्नेहरुले धार्मिक द्वन्द्वको बिजारोपण गरेका हुन् । हामी त्यो गल्ती सच्याउने अभियानमा छौं ।’
ट्वीटमा उनले भनेका छन्, ‘ हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मको साझा आस्था ‘हलेसी’ संस्कृतिको संरक्षण नै आफूहरुको लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘सनातन धर्म नष्ट गर्ने षडयन्त्रकारीहरु आफैं नष्ट हुन्छन्,’ ।
जनभावना विपरित विदेशीको दवाव र प्रभावमा धर्मनिरपेक्षता लादनेहरूले धार्मिक द्वन्द्वको बिजारोपण गरेका हुन्।हामी त्यो गल्ती सच्याउने अभियानमा छौं।हिन्दु,बौद्ध र किराँत धर्मको साझा आस्था ‘हलेसी’ संस्कृतिको संरक्षण हाम्रो लक्ष्य हो।सनातन धर्म नष्टगर्ने षडयन्त्रकारीहरु आफै नष्ट हुन्छन् https://t.co/7V0afom1bq
— Kamal Thapa (@KTnepal) December 6, 2018
वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्दै साना दलसँग छलफल गर्दै राजपा
मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिँदैनौंः मन्त्री बास्कोटा
एसपीहरुको सरुवा, को कहाँ पुगे ?
द्वन्द्वको पीडा राष्ट्रको साझा पीडा हो: पूर्वप्रम खनाल
बालिका बलात्कारको मुद्दामा प्रविणलाई जेल सजाय
गोली चलाएर बैंक लुटिएको कर्मचारीको दावी
ओमनमा २ नेपाली युवतीको रहस्यमय मृत्यु, सँगै बस्दै आएका बंगाली नागरिक पक्राउ
सगरमाथा आरोहणका क्रममा मृत्यु हुनेहरुको संख्या १० पुग्यो
मोदीले पारिवारिक र जातीय राजनीतिबाट माथि उठेर नै जनताको मन जितेका हुन्: भाजपा अध्यक्ष
बार्सिलोनालाई पराजित गर्दै भ्यालेनसियाले जित्यो कोपा डेल रेको उपाधि